Ndezvipi zvidzidzo zvinofanirwa kubvumidzwa kuti zvirege kudzosera iyo kudzidza? | Kuumbwa uye kudzidza
Iwe une zvidzidzo zvingani zvaunofanira kupasa kuitira kuti usadzosere kudzidza?
Maite Nicuesa | 28/05/2021 23:03 | Scholarship
Kana mudzidzi achinyorera kudzidza, vanowanzoverenga mabhesheni efoni iyi zvakanyatsonaka. Nenzira iyi, inopa zvinyorwa zvakakosha mukati mezwi rakapihwa kugadzirisa chikumbiro chako. Kana maitirwo ese aitwa, vanyoreri vanofanirwa kumirira kuburitswa kwechisarudzo.
Kugamuchira kudzidza hakungopi chete bhenefiti, nekuti urwu rubatsiro rwemari runopa rutsigiro kuti uwane mari dzechikoro. Huwandu hwedzidzo hahuperi, nekudaro, kugamuchira rubatsiro kunorevawo basa.
1 Dzosera mari yemubhadharo kuitira kana usingaite
2 Iwe une zvidzidzo zvingani zvaunofanira kupasa kuitira kuti usadzosere iyo MEC kudzidza?
Dzosera mari yemubhadharo kuitira kana usingaite
Kuzvipira kudzidza ndiko kiyi yekuzadzisa zvinangwa zvedzidzo zveimwe kosi. Zvinangwa zvakagadzirwa mumamiriro ezvinhu echidzidzo chimwe nechimwe. Pane mubvunzo unobvunzwa nevadzidzi kana vachinyorera kudzidza. Ndezvipi zvidzidzo zvinofanirwa kubvumidzwa kuti zvirege kudzosera iyo kudzidza? Uyu mubvunzo unofanirwa kubvunzwa nenzira yakasarudzika, nekuti yega yega mhando yehunyanzvi yakasiyana uye ine akasiyana mamiriro. Nenzira iyi, verenga mabheseni ekufona kuti uve neruzivo rwakadzama maererano neese mapoinzi akafanana. Uyezve, iwe unogona kubata iyo inosangana iyo kugadzirisa chero mibvunzo mune izvi.
Uyu mubvunzo unogona kubvunzwa neimwe nzira. Mudzidzi anofanira kupfuura nhamba yakasimbiswa yezvikwereti kuitira kuti achengetedze kudzidza. Izvo zvinofanirwa kuratidzwa kuti mudzidzi anokumbira rubatsiro zvakare mune inotevera kosi. Zvisinei, kana rubatsiro urwu ruchipiwa runobva pane zvaunowana pakudzidza.
Icho chinangwa chehunyanzvi chakaitirwa chimwe chinangwa. Sezvo huwandu hwezvipo hwakaganhurirwa, uye huwandu hwezvikumbiro hunogona kuve hwakawanda, pane maitiro anotsanangudza kuti ndivanani vanozowana rubatsiro rweaya ma grants. Ivo vachave avo vanosangana nezvinodiwa zvakatemerwa mumabheseni. Zvisinei, Kana panguva yekosi iye mudzidzi akatyora nezvakagadzwa mune mamwe mamiriro aya, anowira mukusaita. Uye, chokwadi ichi zvakare chine mhedzisiro zvine chekuita neyakataurwa kudzidza.
Iwe une zvidzidzo zvingani zvaunofanira kupasa kuitira kuti usadzosere iyo MEC kudzidza?
Icho chikonzero nei musangano unounganidza ungangoda kuti iye anenge achinyorera adzose iyo kudzidza ndeyekuti akati rubatsiro haruna kushandiswa nechinangwa charwakaitirwa. Ichi chinhu chinogona kuitika mune akasiyana mamiriro uye mamiriro. Iyo MEC kudzidza ivo vanopihwa nebazi rezvedzidzo uye Vocational Training. Chinangwa chikuru cheizvi rubatsiro ndechekusimudzira rutsigiro redzidzo. Iye anowana uyu kudzidza anofanirwa kudzosa mari yakagamuchirwa kana, semuenzaniso, iye achienderera nekudzima kunyoreswa kuyunivhesiti nzvimbo. Sezvo danho iri rinoratidza shanduko muhupenyu hwake hwedzidzo.
Asi zvinogona zvakare kuitika kuti, zvisinei nekuedza uye nguva yekudzidza, mudzidzi haakwanise kupasa huwandu hunodiwa hwezvidzidzo kuti asadzosere rubatsiro. Mudzidzi anofanira kunge akapasa makumi mashanu kubva muzana emakiredhiti mavakanyoresa. Iyi data inotsanangurwa mu40% kana zvasvika kumabasa esainzi.
Kana rubatsiro rwakati rwatambirwa kuita chirongwa chekupedzisira, uye chisati chaunzwa pazuva rakatarwa, mudzidzi anofanira kuenderera mberi kudzorera mari yaakatambira. Iyo yekudzoreredzwa inofanirwawo kuitwa kana zvanzi rubatsiro hazvienderane neimwe fundo yakagashirwa.
Naizvozvo, zvakakosha kuti iwe utarise kune irwo ruzivo rwunowanikwa mune dzakasiyana nhare dzeufundu hwekugadzirisa kunyorera. Asi zvakakoshawo kuti iwe uverenge izvo zvinoenderana nekutambira kudzidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » University » Scholarship » Iwe une zvidzidzo zvingani zvaunofanira kupasa kuitira kuti usadzosere kudzidza?
Chii chinonzi makwikwi ekuchinjisa?